Ciidammadda xoogga dalka oo dib u furay waddooyin horey u xirnaa – Radio Muqdisho
Ciidammadda xoogga dalka oo dib u furay waddooyin horey u xirnaa
Ciidammadda xoogga dalka Soomaliyeed qeybtooda kusugan Gobollada Baay iyo Bakool ayaa ku guuleystay in ay dib isugu furan wadooyinka isku xira gobollada Hiiraan iyo Bakool.
Wariye Maxamed Xasan Cabdiraxmaan oo Warbaahinta Qaranka uga soo warrama gobolka Bakool ayaa soo sheegaya in waddooyin badan oo muhiim ah isla markaana isku xira gobollada Hiiraan iyo Bakool ciidammaddu ay dib u fureen.
Waddooyinka ciidammaddu ay dib u fureen ayaa horay u ahaa kuwo xiran isla markaana dadka iyo gaadiidka ay mari jirin.
Ciidammadda xoogga dalka oo kaashanaya kuwa AMISOM ayaa wada qorshayaal kale oo dib loogu furayo waddooyin kale oo muhiim ah iskuna xira Gobollada Baay iyo Bakool.
kulan loogu tacsiyeeynayay Marxuum Massalle oo Muqdisho ka dhacay
Tartan Qu’raan Aqris ah oo lagu soo gaba-gabeeyay Kenya
Tartan Qu'raan Aqris ah oo lagu soo gaba-gabeeyay Kenya